Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Isniin Ah & Heshiisyada La Dhameystiray Maanta | Laacib.net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Isniin Ah & Heshiisyada La Dhameystiray Maanta
January 13, 2020 Balaleti 1
Sida aad uga barateen shabakada Laacib waxay idiin soo gudbineysaa wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ee ay qoreen warbaahinta Yurub. Waxaan maanta oo Isniin ah idiin soo gudbineynaa heshiisyada la dhameystiray saaka, kuwa la dhameystirayo waqti dhow ka dib iyo wararkii ay qoreen warbaahinta Yurub.
RASMI: AC Milan ayaa si rasmi ah u dhameystirtay heshiiska amaahda ah ee daafaca kooxda Sevilla Simon Kjaer kaasoo la soo gaabiyay amaahdii uu ku joogay kooxda kale ee Talyaaniga ee Atalanta.
RASMI: Daafaca Liverpool Nat Philipps ayaa amaah dib ugu laabtay kooxda Jarmalka ee Stuttgart ka dib markii ay Reds dib u soo yeeratay bishii la soo dhaafay. Daafaca dhexe ayaa loo soo yeeray ka dib dhaawacyadii Dejan Lovren iyo Joel Matip, wuxuuna qeyb ka ahaa xiddigihii Everton ka cirib tiray FA Cup wuxuuna dib ugu laabtay Stuttgart.
RASMI: Daafaca kooxda Arsenal Kostantinos Mavropanos ayaa tijaabada caafimaadka u maraya maanta kooxda heerka labaad ee Jarmalka ee FC Nurnberg ka hor inta uusan heshiis amaah ah ugu biirin.
Heshiis maanta la dhameystirayo: Goolhayihii hore ee Liverpool haatana u dheela AC Milan Pepe Reina ayaa maanta dhameystiraya ku biiritaankiisa kooxda Aston Villa isagoo xalay joogay Villa Park islamarkaana daawaday xasuuqii ay Man City u geysatay Villa.
Benfica ayaa heshiis la gaartay labada kooxood ee Tottenham iyo West Ham United ee ku aadan iibinta xiddigooda Gedson Fernandes laakiin xiddigaan ayaa doortay Tottenham oo uu tababare ka yahay ninka ay isku wadanka yihiin ee Jose Mourinho. (Sky Sports)
Xiddiga khadka dhexe ee Tottenham Christian Eriksen oo qandaraaskiisa uu dhacayo xagaaga ayaa ogolaaday heshiis afar sannadood iyo bar ah oo uu u saxiixayo Inter Milan, kooxda Spurs ayaa dooneysa 17 milyan ginni haddii uu 27 jirkaan baxayo bishaan Janaayo. (La Gazzetta dello Sport)
Barcelona ayaa xiriir la sameysay tababare Mauricio Pochettino si uu u bedelo Ernesto Valverde. 47 jirkaan reer Argentina ayaa bilaa shaqo ah tan iyo markii laga ceyriyay kooxda Tottenham bishii November. (AS)
Chelsea ayaa wax ka weydiisay koxoda Brighton daafacooda dhexe Lewis Dunk iyadoo Brighton ay duldhigtay 28 jirka Ingariiska ah 50 milyan ginni. (The Times)
Manchester United ayaa dalab 65 milyan ginni ah oo ay la socdaan lacago dheeri ah ka gudbieysa xiddiga khadka dhexe ee Sporting Lisbon 25 sanno jirka Bruno Fernandes ka dib markii la soo diiday dalabkooda lacagta iyo ciyaaryahanka ahaa. (Daily Mirror)
Manchester United ayaa ka mid ah labo kooxood oo u si rasmo ah ugu dhawaaday 16 jirka khadka dhexe ee kooxda Birmingham City Jude Belligam. (Daily Mirror)
Xiddiga khadka dhexe ee Aston Villa Jack Grealish ayaa u soo muuqday bartilmaameedka Manchester City kuwaasoo tartan kala kulamaya kooxda Man United oo iyagana xiiseynaya 24 jirkaan Ingariiska ah. (Metro)
Arsenal iyo wakiilka daafaca dhexe ee Jarmalka Shkodran Mustafi ayaa wahadal la yeelan doona kooxda Galatasaray iyadoo 27 jirkaan uu u wareegayo kooxda Turkiga. (Fotomac)
United Oo Hishiis Ku Abaal Marineysa Xiddigeeda , Arsenal Daafac Ayay PL Ka Ishaaratay Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa
LIVE: Halkaan Kala Soco Wararka Mustaqbalka Ernesto Valverde & Hadii Shaqada Laga Ceyrinayo.
Wararkii Ugu Dambeeyay Mustaqbalka Ernesto Valverde, Kulanka Uu La Leeyahay Maamulka, Hadii La Ceyrinayo & Sawirkii Laga Qabtay Maanta.
One response to “Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Isniin Ah & Heshiisyada La Dhameystiray Maanta”
it was interesting news talking about players who are exchanged in January in order to harden the 16champions league coming on February this year